UPDATE: Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusamarreeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusamarreeb
UPDATE: Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusamarreeb
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Isniinta berri ah ku wajahan magaalada Dhuusamareeeb ee Caasimadda maamul goboleedka Galmudug, halkaasi oo uu ka socdo shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb galo gabagabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo muddo todobaad ah ka socday Dhuusamarreeb, kana qeyb galeen in ka badan 500 oo ergo oo ka socday beelaha Galmudug.
Wararka ay haleyso mareegta Halqaran.com ayaa sheegaya, in Madaxweyne Farmaajo la kulmi doono ergooyinka beelaha, si uu uga dhageysto tabashadooda, isla markaana loo sii wado dadaalada lagu dhisayo Gamudug-ta cusub.
Wafdi horudhac u ah wafdiga madaxweynaha ayaa la filayaa in ay maanta gaaraan magaalada Dhuusamarreeb ee caasimadda Galmudug.
Dadaallo lagu doonayo dhismaha Galmudug loo dhanyahay ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay Dowladda Federaalka ah ka wadday magaalada Dhuusamarreeb.
Dadaallo uu horkacayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan ku dhow heer gabagabo ah lana rajaynayo in ay kasoo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo ay u riyaaqaan dadka reer Galmudug.
Farmaajo oo ku wajahan Dhuusamareeb
Shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug